Prime Time NEWS8 PM_2074_06_31 – NEWS24 TV – Nepali Live – Videos & Entertainment नेपाली लाइभ
यतिवेला पुनः राजनीतिमा उत्तारचढाव देखिएको छ । राजनीतिक दलहरुबीचको ध्रुविकरण सत्तामा पनि प्रष्टिएको छ । जसले अब के होला भन्ने प्रश्नलाई आमजनतामाझ तेर्साइदिएको छ । कतै यी सबै घटनाक्रम निर्वाचन प्रभावित पार्ने खेलमा केन्द्रित त छैनन् ? संविधानसभाबाट नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक बनेको संविधान धरापमा पर्ने त होइन ? यस्ता प्रश्नहरु हरेक नेपालीको मनमा खेल्नु अस्वभाविक होइन । निर्वाचन प्रक्रियाकाबारेमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट र प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी फेरबदल कतै निर्वाचन सार्ने तारतम्य त होइन ? यी प्रश्न स्वयम् राजनीतिक दलहरुले नै उठाएका हुन् । जनताले पाएका अमूल्य उपलव्धि राजनीतिक खिचातानीको कोपभाजनमा नपरोस् ।